Ukupheka okumnandi, okuhlukeneyo, kunye neyona nto ibalulekileyo ngokukhawuleza, akuyimfuneko ukuba ube nomkhosi wonke wabancedisi. Kwanele ukufumana ifowuni enye kuphela - inkqubo yokutya. Iingcamango zokutya kwenkqubo njengenzima kwaye kunzima ukuphatha iiyunithi yinto edlulileyo. Izixhobo zanamhlanje azithathi indawo enkulu, zidibene-zihlelwe kwiingxelo ezimbini, kwaye kulula ukuzilawula. Indlela yokukhetha inkqubo yokutya eyiyo - siya kukuxelela.
Ukususela kumncinci ukuya kumakhulu
Zonke iikhidi ezidibeneyo zingahlula kwiindidi eziliqela. I-Compact - njengomthetho, banesitya esinye kunye neqoqo elincinci lezinto ezinamathiselweyo: i-grinder-grinder, ukusika ii-disc, i-shredders kunye ne-graters, umbhobho wokuxolela inhlama yokukhanya. Iintsilelo - amandla amancinci, amandla aphantsi kunye nemisebenzi emiselweyo. Imveli - idibanisa isitya esikhulu kunye ne-blender. Yenza indawo yokusika imifuno, umxube wombane, i-citrus press kunye ne-juicer. Phantse bonke abavelisi abaziwayo bakhiqiza izixhobo ezinjalo. Iintlobo ze "classics" zikwazi ukwenza iinkonzo ezinkulu zokutya ngexesha elinye, ukulungiselela izitya eziyinkqubo kunye needyuli, umzekelo, isobho se-cream, ipudding, i-mousse, ukhilimu, ukucoca ijusi kwizityalo kunye nemifuno, njl. Ii-unit-multifunctional units, umzekelo uDaewoo, I-Braun, uKenwood, ngokuqhelekileyo eneesitya ezininzi ezinokwaneleyo kunye nesityebi sezinto ezifanelekileyo zokucwangcisa, ukugaya kunye nokutshiza iziqhamo kunye nemifuno, kunye nokucubungula iimveliso eziqinileyo (iisuthi, ushizi), ukuxolela inhlama, njl. Ukongeza nyanzelo Ngokuba "i-universal" blender, i-citrus press kunye ne juicer ye centrifugal, imodeli yodwa ixhotywe nge-screw grinder, eyenza kube lula ukwenza izinto eziqhelekileyo, kunokuba zibethe, zifake inyama, intlanzi, iinkukhu. Ukuqwalasela ngokukhawuleza nangokuchanekileyo indlela imodeli ethile efanelekileyo ngayo, kunele ukuthelekisa izilwanyana ezinhlanu eziphambili zezixhobo ozithandayo.
Abaninzi banamhlanje abahlanganisi abavuni baxhotyiswe ngemoto ukusuka ku-700 kuya ku-1000 W, kwaye ezinye izandi zi-1200 W okanye ngaphezulu. Amandla aphezulu ngokudibanisa nesitya esikhulu asiqhubeki nje ngokukhawuleza inkqubo, kodwa ikuvumela ukuba usebenze iimveliso ezithambileyo ngokucokisekileyo, kwaye kunzima-ngaphezulu. Umthamo wesitya awufaneki ngaphezu kweelitha ezingama-3, kodwa kukho imodeli eyenzelwe i-4-5 ilitha nangaphezulu. Umgangatho osemgangathweni we-blender yi-1.5 ilitha, ubukhulu becala yi-2.2 ilitha. Iimodeli ezihambelanayo, njengomgaqo, zinezimbini ezimbini - iimveliso ezinqabileyo neziqinileyo. "I-Universal" inokufikelela kwi-12-14 ngesivinini sokutshintshwa kwenyathelo okanye ukulungiswa kokungapheliyo, okukuvumela ukuba ukhethe imodeli efanelekileyo kuyo yonke into yemveliso. Uninzi lwezi zixhobo alukwazi ukwenza ngaphandle kwemodi yokupasa, xa injini yesikhashana izuza iqondo elikhawulezileyo lokuchithwa "izinto eziyinkimbinkimbi" izinto ezibonakalayo, icebo okanye amanqatha.
Ukudibanisa okufanelekileyo kufuneka kukhuseleke ngokuthembekileyo kuzo zonke iziganeko ezingalindelekanga: iinyawo zerabhagi azivumeli ukuba ifowuni ifake kwitafile, iifomthi kunye neendwangu zommese aziyi kukuvumela ukuba ulimale. Imbopheleleko yamanqaku amasha kukufumaneka kokukhuselwa kokugqithiswa kokugqithiswa kunye nokushisa kweenjini, kunye nokusebenza okungafanelekanga kunye nokusebenza ngokukhawuleza: ukudibanisa akuqala ukusebenza, umzekelo, ukuba isiqhekeza asivaliwe kude side. Imijelo kunye nokusika iivili ezenziwe ngokukodwa ngentsimbi engenasici. Kwaye iimodeli ezininzi zinokuthi zibe nesitya sensimbi kunye ne-cast metal casting. Kukho izixhobo ezineebhotile ezenziwe ngeglasi engagangekiyo, kodwa izinto eziqhelekileyo ziplastiki.
Ukulula nokulula ukusebenzisa
Imidwebo - "imiqondiso" emzimbeni kunye nencwadi yokupheka kukuvumela ukuba ukhethe ngokulula indlela yokusebenza. Yaye inokwenzeka yokuhlamba izitya kunye ne-buses in-dishwasher inceda kakhulu ukunakekelwa kokuhlanganiswa. Abakhiqizi abaziwayo baxhobisa nangona imodeli eneenkcukacha ezinamacandelwana kunye negumbi lomthamo wamandla kunye nebheyi yokugcinwa kwezinto zokusebenza ukwenzela ukuba zonke izinamathiselo zisondele. Iikhompyutheni zanamhlanje kunye nezisombululo zonyango zangaphambili zandisa ukwenziwa komsebenzi wokudibanisa. Umzekelo, i-"drive drive" (i-Bosch Double Action kunye neKenwood Dual Drive) inikezela ngokukhawuleza kokujikeleza kweebhulo: ngokukhawuleza-ngokubetha kunye nokuphuza, okufanelekileyo ukuxolela inhlama eninzi. Izixhobo ezinjalo nkqubo zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zihlala zikhona. Kwindlela eqhelekileyo yomsebenzi we-blender, nawe unokwenza utshintsho: U Tefal, umzekelo, ukhishwe i-Store'Inn idibanisa ne teknoloji - ukuxuba okungafaniyo: "iglasi" ye-blender ine-knife ephawulwe phantsi. Ngamanye amaxesha ikiti ibandakanya izibhamu ezingavamile. Ngokomzekelo, i-disc-emulsifier yokubetha amaqanda kunye nokupheka i-mayonnaise, umbhobho okhethekileyo wefries zaseFransi, njl. Uchungechunge olutsha lwe-Philips Robust inombumba ombini wokubetha amaqanda abamhlophe, inhlama elula kunye nekhilimu, kunye ne-Bosch ProfiKubixx iyimbusi ekhethekileyo yokusika imifuno kunye neekhabhi. Ayikho indima encinci ekuphuhlisweni kweemodeli ezintsha zenza lula ukusebenzisa. Ngoko, iKenwood FP 972 ifakwe isitya esinomlomo okhulu kakhulu kunye ne juicer kunye ne-Total Clean Clean-self-cleaning system, kwaye uMoulinex Masterchef 3000 usebenzisa i-Easy Lock inkqubo: isiqwenga sale nhlanganisela sivula kwaye sivale ngokukodwa.
Imishini yokucoca yilabo bavuni besihlobo esilandelayo. Ezi ziyunithi ezisemgangathweni, apho imoto ikhona phezulu. Ziyaziwa ngecala elinamandla lensimbi, isitya sesimbi esinamandla, amandla am phezulu kunye nenani elikhulu leziqhotyoshelo kunye nezixhobo.
I-KRUPS KA 9027 I-EXPERT
Lo mshini onokhenkethi onamandla kunye nemisebenzi eminingi kunye neeseti ezinkulu zezinto zokusebenza. Isethi ibandakanya ukusika i-graters, i-whisks kunye nabaxoxayo, i-blender, i-screw leger kunye namanye amabhulo, kunye nencwadi kunye neendlela zokupheka. Ifowuni isebenza phantse.
Isitya se-4.6 ilitha sikuvumela ukubetha amaqanda angama-12 ngexesha elifanayo. Ubuchwephesha beentshukumo zeplanethi yamacangqa kuqinisekisa ukufanisana nokuxoxisana kwanoma yikuphi ukuhambelana. Phakathi kwezixhobo ezongezelelweyo - i-slicer, umshicileli weejikijolo, umjila wezolimo, njl.
Indlela yokukhetha ifriji efanelekileyo kunye naluphi uphawu
Ikhefu leKiko elihle kakhulu
Imilinganiselo ebalulekileyo yokukhetha isiqandisisi
Amanyango omntu: ukunakekelwa kweenwele
Iingcebiso ezinobungozi: kuthatha ixesha elingakanani ukugcina uthando luthando?
Indlela yokubopha ingxowa yendoda kunye neenaliti zokudibanisa?
Yintoni ebangela iincwekhwe zakuqala?